Anti-cafe Izhevsk ngokuya funa. Lapha, induduzo abantu abasha ukuchitha kusihlwa futhi impelasonto yonke. Ezindaweni ezinjalo sinikezwe inkululeko enkulu yokwenza kanye zokuxhumana bushelelezi. Labetibambile kusihlwa bona zijabulise futhi unike amandla umsebenzi ngosuku omusha.
Isikhungo sokuqala esinjalo wavula ngo-2010. Anti-ikhefi inenqubomgomo ukuhluka operation ukuthi lihlukile izikhungo ezivamile. Lapha isivakashi okhokhela isikhathi asichitha kuwo. Ezinye izikhungo ulindele ukukhokha ngomzuzu, kanti abanye - amahora.
Le ntengo kuhlanganisa neziphuzo ezinoshukela neziphuzo hot. Futhi zonke luhambo i amakhasimende isikhungo ukujabulela angenamkhawulo. Ngakho, kumnandi futhi kusihlwa bezijabulisa izobiza isamba nesizotha.
Ngo Izhevsk anti-ikhefi izivakashi Umenyiwe eziningi zokuzijabulisa okuthakazelisayo:
ukusebenza izinhlobo ezahlukene;
Okwavelela esemqoka yalolu hlobo cafe ukukhulumisana. Abantu uza lapha kaningi ukuthola abangane abasha.
Anti-ikhefi "indlela" (Izhevsk)
Impahla emgwaqweni. Ukunqoba, 43. I ikhefi ivuliwe nsuku zonke kusukela 10.00 kuya 23,00. Kube njalo kwenziwe ukwenza izinto ezithakazelisayo. Lokhu kungaba ekilasini inkosi ubuciko massage noma ukupheka izitsha ezingavamile.
Ukuhlala kule isivakashi anti-ikhefi Izhevsk kuwufanele 1.5 ruble. iminithi bese 2 deda ngayinye. isikhathi, uma uweta wotshwala enkantini ukhonza. Ngezinsuku zemikhosi ethile uchitha etafuleni imidlalo tournaments. master abanolwazi sizodingida imithetho Wabasaqalayo.
Futhi cafe nge itafula ibhola. Kanye ngesonto nazi imincintiswano ayeba phakathi abasebenzisi abanolwazi kanye Wabasaqalayo. Esikhathini isikhungo ihlelwe ukubukwa lilonke amafilimu ethandwa.
"Mechanism" inikeza ukugubha yimuphi umcimbi insimu yalo. It kuyodingeka bakhokhe kuphela iqashwe egumbini. Ukudla neziphuzo kungaletha. Amakhasimende nganoma isiphi isikhathi akavunyelwe ukwenza kabusha ukuhleleka kuka kusuka kwimenyu.
Uma kudingekile, abasebenzi uzokwenza uhlelo ukuzijabulisa yezivakashi. Imidlalo yamabhodi futhi aduduze atholakale izivakashi mahhala. Ungakwazi oda umculo bukhoma noma nabangani ngesikhathi sekhefu phakathi kumnandi ukubukela comedy zakho ozithandayo.
Abasebenzi amathilomu efanele uhlele usuku lokuzalwa kwengane. Zinikeza Uhlelo ezithakazelisayo ukuzijabulisa wonke amaqembu yobudala kanye Animators.
Anti-ikhefi "Ole Lukkoye" (Izhevsk)
Ukuze nezingane ezingenacala kuleli dolobha kukhona izikhungo zalolu hlobo. Lapha ngempumelelo futhi kuyathakazelisa ukuchitha izingane isikhathi bobudala obungefani. "Ole Lukkoye" emgwaqweni. Maksima Gorkogo, 162.
Ngoba ukuzijabulisa izingane kukhona ezihlukahlukene imibukiso nge ukubhuka:
krioshou ne liquid nitrogen;
Ukuze ephathini yelusuku lwekutalwa angamenywa emaphaphethi futhi Animators. Njengoba ukhonza okumnandi awukudla ushokoledi umthombo. Ezinganeni izingane eminyakeni engu-10 ubudala u-anti-ikhefi Izhevsk ihlelwe play endaweni ebizwa ngokuthi "The Jungle". Lapha, i-anezikhala okhethekile kuba Maze nge-slide. Futhi-ke, abathandwa zonke izingane ichibi eyomile amabhola.
Lesakhiwo has a endaweni ehlukile ukubukela opopayi nge armchairs ukhululekile futhi SOFAS. imidlalo IBhodi kanye amageyimu evidiyo ayatholakala uhla enkulu.
Ukuze lo mkhosi, amakhasimende ukubhuka show nge izilwane oqeqeshiwe. Bathatha kancane ingxenye izinja smart futhi raccoon. Futhi kule show, amagundane, amaqhude ngisho izinyoka.
abaculi abanolwazi ngokushesha futhi kahle inflict ebusweni akvagrim. Baby imizuzu embalwa iyoba intandokazi cartoon abalingiswa futhi inganekwane. Zonke imibala abe Ukwakheka yemvelo futhi ngeke balimaze isikhumba zezingane.
abasebenzi yiluphi uhlangothi zezingane cafe ehlotshiswe Balloons elikhanyayo. Kunzima ukucabanga lokuzalwa kwengane ngaphandle le-accessory ye. Labapheki anti-ikhefi ukudala yobuciko yangempela amnandi.
"I-New York" e Izhevsk
Lesi sikhungo itholakala emgwaqeni. Communards, 218. I ikhefi ivuliwe nsuku zonke kusukela 10.00 kuya 23,00. Lapho ongakwenza ube kude kusihlwa yezimvula athule noma ukuzijabulisa nabangane emidlalweni igumbi.
Anti-ikhefi "New York" (Izhevsk) ihlukaniswe yaba izingxenye eziningana. Kokunye ahlelwe amatafula umsebenzi nokungcebeleka. Eceleni ngalinye kunesikhungo esiyinkimbinkimbi isokhethi, ukuze amakhasimende akwazi ukuhlala yakho ephathekayo. Cafe has free Wi-Fi.
Endaweni amageyimu kuyinto etafuleni football. On emashalofini ukhetho olukhulu omagazini nezincwadi lwaletinye tifundvo. Kukhona futhi amageyimu evidiyo ideskithophu ukuzijabulisa.
Kuyinto iziko nezihlalo ukhululekile emagumbini ehlukene. Lapha ungakwazi baphumule inkomishi yekhofi futhi ibhuku lakho olithandayo. Izivakashi nje ukukhokhela ukuhlala cafe. Azikho oweta kanye izivakashi aphathe ngokwabo ukuze ikhofi kanye amaswidi bebodwa. Le ndlela yenza ukuba isimo sasekhaya-like futhi kwenza amakhasimende uphumule.
I anti-ikhefi elibamba ezihlukahlukene indaba ephathwayo nobusuku obungamashumi amane:
imihlangano nabantu ezithakazelisayo.
Imenyu ingaphezu 10 izinhlobo itiye nekhofi. Izimenywa zingabe ukujabulela zonke izinhlobo amaswidi. Okuphuzwayo afakiwe izindleko zokuzigcina endaweni cafe. "I-New York" linikeza ukubamba nanoma celebration umndeni noma umcimbi yenkampani egumbini uhlobo cafe.
Kukhona tournaments aphethwe ngezikhathi phezu imidlalo umdlalo webhodi. Beginners Ungafunda imithetho amakhasimende avamile.
Izhevsk anti-ikhefi kuzosiza ukuthola abangane abasha futhi nijabula nabo. Le fomethi izikhungo Kule minyaka embalwa edlule zihamba phambili. Ngakho-ke, lo muzi has amathilomu eziningana ezinjalo.
Indawo yokudlela "matryoshka" in Omsk: imenyu, design elingaphakathi, umculo, ithala
"The Barn" yokudlela (Krasnoyarsk). Imenyu, ikheli, izibuyekezo zezivakashi
Lapho ukutshala nogaliki namadlelo - ukukhetha isikhathi esingcono
Ezibiyele eMoscow. Russia, eMoscow, ezibiyele